Home » Cultures » လူတန်းစား ခွဲ သတဲ့လား
Print Screen လုပ်ပြီး တင်တဲ့ ပုံက မပေါ်ပါ။
Screen ပေါ်ကပုံ ကို ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်ပြီး တင်တဲ့ ပုံက မှ ပေါ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပုံဝါး နေသည်၊ ခွေးလွှတ်။
ခီညားဒို့ နှစ်ယောက်ကို သပ်မဲ…..
ဂျပန်က.. ကိုးကိုးဆေး(အထက်တန်းကျောင်းသူ)တွေ… စကပ်မတိုရဖို့ကျောင်းမှာတားထားသမို့…အတန်းပြီးတာနဲ့..လမ်းတင် ရှိတဲ့စကပ်ကလေး.. ခါးကနေလိပ်လိပ်ပြီးတင်လိုက်တာ.. တွေ့ဖူး..
.. တမြန်နေ့က.. ဘုရ်ှအငယ်သမ္မတဟောင်းနဲ့.. ဒလိုင်လားမားတို့တွေ့ကြတယ်..
ဘာပြောပြော ဒီရောက်တယ် ညော်…!!!
ကျောက်စ်ကတော့… ဘယ်ဆိုင်မှာစားစား စားမကုန်ရင် ထုပ်ပြီးပြန်သယ်လာဖို့ ဝန်မလေးဘူး…
Subway လှေခါးအတက်တွေဆို… ကိုယ်တွေက ခေါင်းငုံ့ထားရတယ်… ခွီး
.ကျုပ်လည်း ကိုကျောက်စ် လိုပဲ..ကျန်တာသယ်လေ့ရှိတယ်ဗျ..မရှက်ပေါင်ဗျာ
၂၀၀၀၀ ဆိုတာ သများ တစ်ပတ်သုံးလို့ရတယ်… ကိုယ့်ဘာသာကို ချက်စားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ… အာ့ကြောင့် junk food တွေ သွားစားမယ်ဆို အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ လောက်ကုန်တယ်.. ဒါမျိုးဆို လခထုတ်ပြီးပြီးချင်း သွားစားပလိုက်တယ်…
ကိုယ့်နိုင်ငံက အတော်လေးခေတ်နောက်ကျတာကို နယ်တွေကြည့်ရင် အတော်သိနိုင်တယ်… နယ်ဆိုတာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိပ်ရနိုင်တာ.. ဒါပေမယ့် သူတို့က ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြုတ်စားရတာ… ရယ်ဒီမိတ်တွေ ဝယ်ရတာကို ခေတ်မီတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်… တော်ရုံတန်ရုံ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာမျိုးတောင် ဒိတ်အောက်နေပြီ… ရယ်ဒီမိတ်လေး ဝယ်လိုက်တာမှ ခေတ်မီတယ် ထင်နေကြတယ်…
(မကြိုက်လဲ ဘာလို့ မှာလဲ၊ မကုန်လဲ ဘာလို့ ပါဆယ်ထုတ်မသွားလဲ၊ (ဒါမှမဟုတ်) အသေးမမှာလဲ တွေးမိသေး။
သဂျီးနဲ့ မလတ်ကြားက လူတန်းစား ခွဲခြားမှုကိုတော့ သူ့အတွေးနဲ့သူ လို့ပဲ….
လော့ကျတဲ့အိမ်က..မြန်မာတွေကတော့.. စားသောက်ပြီး ကျန်တာ အိမ်ပြန်မထုတ်သွားရင်.. ငပေါလို့တောင်ထင်မယ်…
သဂျီးပြောသလိုပါပဲ.. ဂငယ်တွေက ထမင်းစေ့ကျန်တာမကြိုက် မကုန်တာမကြိုက်တော့
ဘာမှမကျန်အောင် စားရင်း စားရင်းနဲ့ ပေါင် ၂၀၀ ကျော်လာတာဘာဘဲ ဗျာ။
မြန်တျန့်ကတော့ ကမ်ဘာမှာ လှူဒန်းစား ခွဲခြားမှု အမြင့်ဆုံးပါ တယ်ဆိုရမယ်။ …
ဆိုင်သွားစားရင် ကုန်အောင်စားတယ် မကုန်ရင် ပါဆယ်ဆွဲ တယ်
.မြန်မာပြည်လူတန်းစားခွဲခြားမှုက လုပ်တဲ့အလုပ် အဆင့်တန်းနဲ့ သိပ်မဆိုင်လှဘူး။ ဘာမှန်းကို မသိပါဘူး။ အရာရှိမနဲ့ စာရေးမ ထိုင်ခုံနေရာချင်းတော့ ဘယ်တူပါ့မလဲနော်။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာမှာ နေရမှာပေါ့။ စာရေးမက အရာရှိမ ထိုင်ခုံပေါ်သွားထိုင်လို့ ဘယ်ရမလဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်လူတန်းစားခွဲမှုက ဘယ့်နှယ့်ကြီးမှန်းကို မသိဘူး ။ ရှိကိုရှိနေတယ်။ အချင်းချင်းတောင် ခွဲကြတာ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မတူသလို မတန်သလို အဲလိုမျိုး ။ သြော် ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး တစ်လုံးကိုတောင် အဓိပ္ပါယ်အများကြီးထွက်အောင် ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ။
.ချွေတာရေးနဲ့ မိမိဘ၀ကိုတည်ဆောက်တာတွေကို တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ မြို့ပေါ်မှာ ရေခဲမုန့်လေး လက်တွန်းလှည်းနဲ့ ပတ်ရောင်းတဲ့ လူက တိုက်ဆောက်လိုက်တယ်။ ရေသန့်ပို့တဲ့ ကောင်လေးက ထော်လာဂျီ ၀ယ်တယ်။ ဘာ ၂လုံးမှ မထိုး၊ ၁လုံးလည်း မလုပ်။ တခြား အပိုအလျှံရအောင်လည်း ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ အဲဒီအလုပ်တစ်ခုထဲနဲ့ အောင်မြင်နေတာပဲ။ ပညာလည်း မတတ်ဘူး။ အဲဒါကျတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ။ .မျှစ်တောင် ပြောရရင် သူတို့ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တိတ်တဆိတ် ရှက်မိပါတယ်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသက မေတ္တာပို့မှာ အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ ဆိုတာ ကြားဖူးကာစ သိပ်နားမလည်ဘူး။
တဖြေးဖြေးနဲ့ အသက်ကလေးရလာတော့မှ လူတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စတွေ့တာနဲ့ ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး ကြည့်တတ်ပြောတတ်တာတွေကို သတိထားမိလာတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း (အော်ပီကျယ်ကာတွန်းမှာလည်း ပါသလို) ကိုယ့်ကိုသူများက ဘယ်လိုမြင်တာ အရေးမကြီးဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်တာက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားရင်း tension တွေ အတော်များများ လျော့သွားတယ်။
မားကက်တင်းမှာတော့ လူတန်းစားခွဲခြားပီး Target Consumer သတ်မှတ်မှပဲရဒယ်…. နောက်ပိုင်း လူကြားကောင်းအောင်၊ အထက်တန်းလွှာ၊ အောက်တန်းလွှာခေါ်မကောင်းလို့ SEC (Social Economic Class) A, B, C စသဖြင့် ပြောကြတယ်…
စတာပါ.. စတာပါ… ဆက်ပြောဂျပါ… ဆေးရိုးလေးနဲနဲ ၀င်ရောင်းကျိဒါ
တကယ်တော့ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကို ငယ်ကတည်းက လိုက်နာရမယ့်